Indlu yaseBeach eLong Point. - I-Airbnb
Indlu yaseBeach eLong Point.
Iflethi yonke sinombuki zindwendwe onguJojo
Uza kuyithanda indlu engaselwandle eLong Point. Le ndlu ifumaneka eLong Point Beach Resort. Iyunithi iyindawo entle yokubuka ichibi. Yiza uzikhuphe okanye uzonwabise nentsapho. Iveranda ngamanyathelo okuya kunxweme lwabucala. Uza konwabela le ndlu yeholide unyaka wonke. I-Snow-shoe okanye i-cross-country ski ebusika okanye umjikelo okanye i-paddleboard ehlotyeni. Soze ukruqule okanye ungaphumla nje.
Indawo yethu iyafumaneka ukuba kuhlalwe ixesha elide ngexabiso elithotyiweyo.
Le yiyunithi yomgangatho ophantsi. Unokuhamba ukusuka kwi-patio ukuya kunxweme lwangasese. Iqaqambile, yangoku kwaye ihonjiswe kamnandi. Kukho amagumbi amabini okulala kunye ne-sofa yokutsala. Amagumbi okuhlambela amabini aneshawari. Le yenye yeeyunithi ezifikelelekayo kuphela. Ikhitshi inayo yonke into oya kuyidinga ukuze ulungiselele ukutya kwakho okumnandi. Ikhebula kunye neWifi zibandakanyiwe. Ukukwazi ukuba "usebenze usekhaya". Eli candelo linazo zonke izinto eziluncedo, kubandakanya iwasha kunye nesomisi.
Iindwendwe zingonwabela indawo yentlalo yangaphandle enendawo yomlilo kunye ne-BBQ. Abahambi ngephenyane banokufikelela kwiMarina ngqo emva kwepropathi.
Kuhambo olufutshane ukuya kwidolophu enqabileyo yasePort Rowan okanye uye kwindawo yaseTurkey kubomi basebusuku. Kukho iindawo zokuthengisa iwayini zalapha ekhaya kunye neendawo zotywala ezincinci. Kubathandi beNdalo, tyelela ipaki yePhondo, iiNdawo zoLondolozo, okanye iLong Point Bird Conservatory. Ukuba ufuna i-adventure, kukho i-Eco-Adventure Centre okanye izilingo zebhayisekile yeentaba ezilungisiweyo. Iindawo ezininzi zegalufa. Kukho izivumelwano zesikhephe zasekhaya zokuloba okanye ukurenta kwijet ski.
Sifumaneka ngefowuni, itekisi okanye i-imeyile.